विश्व – Etajakhabar
एजेन्सी । तपस्या परौंठा जक्सनमा गएर ५० मिनेटमा ३ वटा परौंठा खान सकेमा रमाइलो अफर पाइनेछ । प्रशंग हो भारतको हरियाणाको रोहतकमा रहेको एक खाजा घरको । परौंठा खाजाघरले ल्याएको ५० मिनेटमा ३ वटा परौंठा खान सकेमा जीवनभर सित्तैमा परौठा खान पाइने अफर । धेरै मानिसहरु उक्त अफर जित्नका लागि परौंठा खाने प्रयास गर्दछन् तर ५० मिनेटमा ३ वटा परौंठा सक्ने मानिस जम्मा २ जना मात्रले खाजा घरको नियम पालना गरेर खान ...
गत मार्चमा उत्तर प्रदेश विधानसभाको चुनाव परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै भारत प्रशासित कस्मिर नेता ओमार अब्दुल्लाले श्रृङ्खलावद्ध ट्विट गरे। र, भने– ‘सन् २०१९ लाई बिर्सौं र सन् २०२४ का लागि योजना बनाऔं।’ भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ‘क्लिन स्विप’ गरेपछि नेसनल कन्फरेन्सका नेता अब्दुल्लाले सन् २०१९ मा हुने लोकसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लहर च...
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा महँगो चकलेटको मूल्इ कति पर्ला ? १ हजार ५ हजार वा १० हजार ? तपाईहामीलाई पत्याउने मुस्किल पर्ने चकलेट पोर्चुगलको ओबिडोसमा भएको चकलेट मेलामा प्रर्दशनमा राखिएको छ । जसको मूल्य ७७ सय २८ युरो अर्थात् झण्डै १० लाख रुपैयाँ तोकिएको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । चकलेटको खोल समेत सुनबाट बनेको यो चकलेटको खोल पनि खान मिल्ने सुन भएको कम्पनीले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रि...
काठमाडौं । बोलिभरको सबैभन्दा ठूलो नोट एक लाख हो । जसको बजारमा खासै मूल्य छैन । अन्तराष्यि संचार संस्थाहरुका अनुसार ब्लाक मार्केटमा १ लाख बोलिभर बराबर ०।५ डलर पाइन्छ । भेनेजुएलामानै पनि एक लाख बोलिभरमा एक कप कफी किन्न सकिँदैन । एक किलो चिनीको मूल्य ढाई लाख बोलिभर बराबर भएको छ । अन्तराष्ट्रिय संचार संस्थाहरुका अनुसार यहाँ आर्थिक संकटका कारण महंगी बढेको छ । गत वर्ष महंगी ६००० प्रतिशत बढेको थियो ।...
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक समुद्री किनारमा एक सय बढी ह्वेल मरेका भेटिएका छन्। पश्चिम अष्ट्रेलियाको हेमिलिन बे नामको समुद्रमा शुक्रबार बिहान माछा मार्न गएका ब्यक्तिले ह्वेलहरु समुद्रको किनारमा अलपत्र परेको देखेपछि सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेका थिए। सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उक्त समुद्र किनारमा १ सय ५० बढी ह्वेलहरु अलपत्र भेटिएका थिए। अहिलेसम्म १ सय बढी ह्वेलहरु मरिसकेका...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा फागुन २८ गते दुर्घटना भएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान चालककी पत्नीको पनि ज्यान गएको छ । विमान चालक अविद सुल्तानकी पत्नी अफ्सना खानमको ढाकाको नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ न्यूरो साइन्स एण्ड हस्पिटलमा शुक्रबार विहान उपचारका क्रममा निधन भएको हो । श्रीमान सुल्तानको मृत्यु भएको खबरले हृदयघात भएपछि आकस्मिक रुपमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । गएको फागुन २८...
काठमाडौँ । फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गले एउटा राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनीले लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको विवरण लिएको विषयमा आफ्नो कम्पनीको गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। राजनीतिक लाभका लागि केम्ब्रिज एनालिटिकाले गलत तरिकाले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूको सूचना लिएको आरोप लागेको छ।केम्ब्रिज एनालिटिकाले पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूबाट विवरणहरू संकलन गरेको र ती मध्ये धेरैले आफ्ना विवरण दिन सहमति नजना...
बेरुत, लेबनान - सिरियाको उत्तरपश्चिमी शहर इदलीवमा बुधबार गरिएको हवाइ आक्रमणमा परी कम्तिमा १६ छात्रछात्रासहित २० जनाको निधन भएको सिरियाली मानव अधिकारवादी समूहले जनाएको छ । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले भनेको छ, “इदलीव प्रान्तको काफर बातिख क्षेत्रमा आक्रमणमा १६ जना बालबालिकासहित २० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ ।” संस्थाका प्रमुख रामी अब्देल रहमानले भन्नुभयो, पूर्व अलकायदा समूहका धेरै ...
एजेन्सी । भारतका मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ राज्यबीच हालै एउटा कुखुराको विषयलाई लिएर भएको विवादले उग्र रुप लिएको छ । मासुको उत्कृष्ट स्वादका लागि चर्चित कडकनाथ प्रजातिको कुखुराको विषय दुई राज्यबीच सुरु भएको विबादले ठूलो रुप लिएसँगै दुईराज्यबिच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भएको छ । व्यवसायिक लाभ लिने दाउमा भारतका यि दुईवटा राज्य लागिपरेका छन् । उनीहरुले उक्त प्रजातिको भौगोलिक संकेत नम्बर अर्थात् जिट...
फिलिपिन्स । पिलिपिन्सको साब्लायन भन्ने ठाउँमा भएको बस दुर्घटनामा परी १९ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति राजमार्गमा गुडिरहेको बस दुर्घटनामा परेको थियो ।अन्य २५ जना घाइते भएका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले स्थानीय समयअनुसार राती ९।३० बजे दुर्घटना भएको बताएका छन् ।गुडिरहेको बसका चालकले नियन्त्रण गुमाएपछि बस दुर्घटनामा परेको प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन नगर कार्यालय साब्लायनका प्रमुख ...